China NRC rubbering Abenzi daka kunye Suppliers | Hongyuan
Le mveliso elungisiweyo ukutyabeka ngebhitumene manzi ezenziwe irabha modified itha kunye nezongezelelo ezizodwa ngokusebenzisa inkqubo ekhethekileyo. Isenokuba singasebenza nezinye inwebu ngamanzi ukwenza umaleko edityanisiweyo manzi. Xa sisetyenziselwa .lulwaleko manzi ezimeleyo, umphezulu waso uya ukhuselwe usambathisa umaleko. Imodeli Product kunye neenkcukacha (yahlukene iindlela zokwakha): Uhlobo Ukutshiza, uhlobo ukupeyinta, grouting uphawu uhlobo
● Self-nowokunceda: umbandela uya makangahlukani ngexesha lokwakha, nto leyo yenze ezizinzileyo kunye ne-eriyeli umaleko manzi. Maleko manzi ezonakeleyo zokwakha nokusebenza ziya kuba self-kwakulungiswa ukuthintela amanzi abangena kwi mxube manzi, kunye nokugcina ukuqhubeka umaleko manzi. ● Adhesion: impahla manzi nga kulandelwa kunye ikhosi isiseko nkqu emanzini ukuqinisekisa ukusebenza kakuhle amanzi xa kusenzeka deformation noshowo. ● ukumelana leaching: umbandela manzi akayi Leach ngenxa yokuba ukugungxula amanzi angaphantsi komhlaba emva zokwakha.
● ukumelana Chemical: acid, kwealkali, netyuwa umsebenzi oncomekayo ukumelana;
● zokwakha Easy: Iimfuno eliphantsi kwi ikhosi base simahla ukususela unyango ekhethekileyo ukunciphisa ixesha lokwakha, kunye nolwakhiwo kubushushu elisezantsi uvumelekile;
● ulondolozo Easy kunye nolawulo
isiqulatho High eqinileyo ●, yaye akukho izinto ezililize;
● Ungaze kanjani, non-ityhefu esha, kunye nongcoliseko-free;
● I-imveliso kugcinwa kwisikhongozelo evaliweyo ixesha elide, ngaphandle kokuphazamisa ukusebenza kwayo.
Scope application NRC non-ziyahlala irabha ngebhitumene ukutyabeka inokuba masifakwe unyango manzi ukuba izakhiwo ezintsha, okanye ukulungisa umaleko eyonakeleyo manzi. Uya kusebenza ukuba zingangenwa iindawo eziqhelekileyo, kwakunye amalungu deformation kunye nezinye izikhundla ezikhethekileyo. Xa kuthelekiswa nezinye izinto manzi, oko zinezibonelelo elikhethekileyo unyango manzi izikhundla ezikhethekileyo.
● I-imveliso zingasetyenziswa ukwenza umaleko manzi, okanye ukubambelela inwebu manzi glue manzi, ukuze zenze umaleko edityanisiweyo manzi. ● It has ukusebenza ngcina oluhle kunye nazo zonke iintlobo inwebu manzi (kubandakanywa EPDM rubber inwebu, polyethylene ezinepolypropylene ifayibha inwebu manzi), nto leyo yenze umaleko edityanisiweyo manzi. ● Ukunamathela ne ikhosi isiseko ukwenza maleko manzi ulusu-ezifana ukunqanda ngokugqithisela amanzi;
● Iimfuno Low kwi ikhosi kwesiseko ukufuma, kunye nokwakhiwa ukuze iphunyezwe kungekudala xa amanzi kwi ikhosi lesiseko icocwe, ukwenzela ukunciphisa ixesha lokwakha;
● Inkqubo ezahlukeneyo kunye nokwakhiwa ezingafanelekileyo imveliso ukuze zipeyintwe okanye kutshizwa ekwakheni.
● Outstanding kubushushu obuphantsi constructability: ukutshiza ukwakhiwa inakho ukusebenza phantsi kweemeko asezantsi obushushu.
● nezimo High deformation noshowo: impahla iye extensibility kunye adhesion ukuziqhelanisa ngokugqibeleleyo deformation noshowo, kwaye uphephe umonakalo layer manzi okubangelwa deformation noshowo ezibalaseleyo. Xa uyila maleko edityanisiweyo manzi kunye imifinya, NRC ezingezo-ziyahlala irabha ngebhitumene ukutyabeka ukubamba yonke uxinezeleko deformation ukuqinisekisa ixesha elide intactness of maleko edityanisiweyo manzi.
Composite Construction ne ndizayo (Chela)
Ukufudunyezwa NRC Non-ziyahlala ngerabha ibhitumene Ukwaleka
Ukutshiza of NRC Non-ziyahlala ngerabha ibhitumene Ukwaleka
Index Performance Technical
Standard Executive: Non-ziyahlala irabha ibhitumene (NRC) Ukwaleka (Q / 0783WHY003-2012)
Content Solid% ≥
100% Ukwehluleka uhambelane
Low nokuguqu Ubushushu
20 ° C, akukho fissure
-25 ° C, akukho fissure
Akukho sliding, elibaleka okanye ukulandwa
Thermal Ukwaluphala-70 ° C × 168h
-15 ° C, akukho fissure
Mass Guqula /%
Ezenziwayo phantsi Sokuchitha State / N / mm
Anti-nangokuqhuqha Performance / 0.6MPa
: Previous double manzi coating ingxenye
Okulandelayo: High elastic ubukhulu acrylic wowadlayo ngamanzi alufane
Acrylic Ukwaleka okungangenwa
Itha Isekelwe Ukwaleka okungangenwa
Waveza acrylic Ukwaleka okungangenwa
Flexible Polymer-Cement Ukwaleka ngamanzi
Ukwaleka Js okungangenwa
ezimbini Component lyu Ukwaleka ngamanzi
lyu Ukwaleka Kuba eziphathekayo , Tpo ndizayo okungangenwa, Flexible Polymer-Cement Ukwaleka ngamanzi , Acrylic Ukwaleka okungangenwa, Amanzi Base lyu Ukwaleka ngamanzi , Single-sangqa zophahla ndizayo ,
lyu Ukwaleka Kuba eziphathekayo , Acrylic Ukwaleka okungangenwa, Flexible Polymer-Cement Ukwaleka ngamanzi , Single-sangqa zophahla ndizayo , Tpo ndizayo okungangenwa, Amanzi Base lyu Ukwaleka ngamanzi ,